မူလတန်းမှာသုံးခဲ့တဲ့ school bag ရဲ့ သားရေကနေ အမှတ်တရပစ္စည်းများ ပြန်လည်ထုတ်လုပ်မှု ရေပန်းစားနေ။ - JAPO Japanese News
မူလတန်းမှာသုံးခဲ့တဲ့ school bag ရဲ့ သားရေကနေ အမှတ်တရပစ္စည်းများ ပြန်လည်ထုတ်လုပ်မှု ရေပန်းစားနေ။
ဂါ 18 Jan 2022, 12:19 ညနေ
ယခု ၂ လကုန်ဆုံးသွားရင် ၃ လပိုင်းကိုရောက်လာပါတော့မယ်။
ဂျပန်မှာက ၄ လပိုင်းကနေ ကျောင်းစတက်ကြတဲ့အတွက်၊ ၃ လပိုင်းဟာ စာသင်နှစ်ရဲ့နောက်ဆုံးလဖြစ်ပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဘွဲ့နှင်းသဘင်အခမ်းအနား၊ နှုတ်ဆတ်ရမယ့် ရာသီဖြစ်ပါတယ်။
ခင်မင်ခဲ့တဲ့သူငယ်ချင်းတွေအတူ ဘဝလမ်းကိုဆက်လျှောက်ကြတဲ့လူတွေရှိသလို… အားလုံးနဲ့မတူတဲ့လမ်းကို ရွေးချယ်ကြသူတွေလည်းရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့၊ ကျောင်းကရခဲ့တဲ့အမှတ်တရတွေကို တန်ဖိုးထားသိမ်းထားချင်တတ်ကြပါတယ်။
ဂျပန်မှာသာရရှိမယ့် အမှတ်တရပစ္စည်းတစ်ခုရှိတာကြောင့် ဒီနေ့တော့ အဲ့ဒါလေးကို မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။
ဂျပန်မူလတန်းကလေးတွေဟာ ကျောင်းမှာ school bag ကိုသာအသုံးပြုကြပါတယ်။
မူလတန်းကျောင်းစစတက်ချင်းအချိန်ကတော့ ခန္ဓာကိုယ်ကသေးလို့၊ အိတ်ကပိုကြီးနေသယောင် မြင်ရပေမဲ့လည်း၊ ၆ နှစ်မြောက် မူလတန်းပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ ပြောင်းပြန်ဖြစ်ပြီး၊ အိတ်ကသေးသွားပါတယ်။
ဒီအိတ်တွေကတော့ ၆ နှစ်လုံးလုံး အသုံးပြုနိုင်တဲ့ ကြံ့ခိုင်တဲ့ Leather school bag ဖြစ်ပါတယ်။
ဈေးသက်သာတဲ့အိတ်တွေလည်း ရှိပေမဲ့၊ ခေတ်ပေါက်ဈေးနဲ့ဆို ယန်း ၅ သောင်းကနေ ၁၉ သောင်းရှိပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်။ ဂျပန်မူလတန်းကလေးတွေဟာ အလွန်ဈေးကြီးတဲ့အိတ်တွေနဲ့ ကျောင်းတက်ကြတာပါ။
အဲ့ဒီလိုဈေးကြီးတဲ့သားရေလွယ်အိတ်ကို၊ အဲ့ဒီအတိုင်းပစ်လိုက်ဖို့က နှမြောစရာကောင်းပါတယ်။
အဲ့ဒါထက် အမှတ်တရတွေရှိနေပြီး၊ ၆ နှစ်လုံးအတူ ကျောင်းသွားခဲ့တဲ့ school bag ကိုပစ်လိုက်ရဖို့ တော်တော်လေးခက်ခဲတဲ့အလုပ်ပါ။ ဒါပေမဲ့လည်း အဲ့ဒီအတိုင်းဆို သိမ်းရမှာလည်းရှုပ်နေတယ်။
ဒါကြောင့်ပဲ school bag ကနေ အခြားသော သားရေပစ္စည်းကိုထုတ်လုပ်ခြင်း ခေတ်စားလာပါတယ်။
၆ နှစ်လုံးလုံးသုံးလာခဲ့တဲ့ school bag ကခြစ်ရာပွန်းရာတွေရှိနေမှာတော့ အသေအချာပဲ။
အဲ့ဒီခြစ်ရာကို အမှတ်တရအဖြစ်နဲ့ ထိုအတိုင်းအသုံးပြုထားတဲ့ ပိုက်ဆံအိတ်ပါ။
အရွယ်ရောက်လာရင် ပိုက်ဆံအိတ်ကိုင်မယ် ဆိုတာကလည်း ကလေးတွေရဲ့ စိတ်ကူးထဲမှာရှိကြမှာပါ။
လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရောက်တဲ့အခါ အသုံးပြုရတော့မယ့် ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ရုတ်တရက် business card နဲ့ Shoehorn (ရှူးဖိနပ်ဝတ်ရာတွင် အထောက်အကူပြုပစ္စည်း) ကိုထည့်ဖို့မလိုအပ်သေးပေမဲ့၊ သူတို့လေးတွေအရွယ်ရောက်တဲ့အထိ ကရုတစိုက်သိမ်းထားပြီး၊ အရွယ်‌ရောက်လာတော့မှ ကလေးတွေကို surprise အနေနဲ့ပေးတာမျိုးလည်း လုပ်နိုင်ပါတယ်။
မူလတန်းကျောင်းပြီးသွားတာ နှစ်ပေါင်း ၃၀ ရှိပြီဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ကတော့ school bag ရဲ့အမှတ်တရနဲ့ အတော်လေးကင်းကွာနေတယ်။ ဒါကြောင့် အသက် ၂၀ ပြည့်တဲ့အခါ ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ ကျောင်းပြီးတာနဲ့ ၈ နှစ်လောက်ပဲကွာလိမ့်မယ်။
ဂျပန်ရဲ့အရွယ်ရောက်တဲ့အသက်အပိုင်းအခြားက ၁၈ နှစ်ကိုပြောင်းလဲလာတာကြောင့်၊ ဒါဆိုရင်တော့ ၆ နှစ်လောက်ပဲကွာပါတော့မယ်။
ကလေးတွေမသိအောင် ဒီလိုလျှို့ဝှက်စီစဉ်ထားပေးတဲ့မိဘကတော့ တကယ်ချီးကျူးစရာပဲနော်
စကားမစပ် school bag ကို အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် အဘိုးအဘွားတွေကဝယ်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ သွယ်ဝိုက်စည်းကမ်းတစ်ခုရှိတယ်။
ချစ်စရာကောင်းတဲ့မြေးလေးကိုဝယ်ပေးချင်တယ်။ မြေးလေးအတွက် ငါပဲဝယ်ပေးမယ်ဆိုပြီး အဘိုးအဘွားတို့ရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ပွဲ…
အဲ့ဒီလိုပြိုင်ပွဲနဲ့၊ ကျောင်းလွယ်အိတ် အသစ်စက်စက်လေးကို ကျောမှာလွယ်ထားတဲ့ ပထမနှစ်ကလေးတွေကိုမြင်ရမှာက ဟောဒီ ၄ လပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခုဂျပန်မှာကတော့ တော်တော်လေးအေးပေမဲ့၊ ဒီလိုနွေးထွေးမှုကိုခံစားရမယ့် နွေးဦးဟာ များမကြာခင်ပဲ ရောက်လာပါတော့မယ်။
မူလတန်းပထမနှစ်နဲ့ အစိုးရပညာရေးအပေါ်သံသယဝင်ခဲ့ပြီး အထက်တန်းပထမနှစ်မှာ ယခင်တက်ခဲ့တဲ့ကျောင်းကိုဝယ်လိုက်သူ !!!
ခြေရာခံလိုက်နိုင်မယ့် credit card ပေါ်လာပြီ။ (ကဒ်နဲ့ ပိုက်ဆံအိတ်ကျပျောက်သွားလည်း အဆင်ပြေမလား?)
အဲဒိုခေတ်မိန်းကလေးများ အပင်ပန်းခံပြီးလေ့လာဆည်းပူသမျှဟာ လက်ထပ်ဖို့အတွက်သာ …..